Omicron : Mihevitra hiverina hitoka-monina indray i Japàna · Global Voices teny Malagasy
Mampahatsiahy ireo taonjato roa nisian'ny sakoku fony vanim-potoana Edo ity
Nandika (fr) i François Noverraz
Voadika ny 29 Desambra 2021 12:38 GMT
Drafitr'ilay tanànam-bahiny fahiny tao Dejima [fr], ao Nagasaki. Toby ara-barotra notantanan'ny tsy miankina ary natokana ho an'ny Eorôpeàna teo anelanelan'ny 1634 sy 1854 izy io, nandritra ny sakoku (鎖国, vanim-potoana fitokana-monina tao Japàna). Sary orizinaly an'i Hidetsugu Tonomura nasiana fanatsaràna kely, nampiasàna ny lisansa Attribution-NonCommercial 2.0 Generic (CC BY-NC 2.0)
[Mankany amina pejy amin'ny fiteny anglisy daholo ny rohy tsy nasiana fanamarihana manokana.]
Taorian'ny nahitàna ilay karazana COVID-19 vaovao, niezaka nanidy tanteraka nandritra ny fotoana fohy ny sisintaniny (habakabaka sy ranomasina) ny governemanta japoney. Niteraka tahotra io fanapahankevitra tampotampoka io ka niampangàna ireo manampahefana ho mitady hiverina amin'ireo taonjato roa nisian'ny “fitokana-monin'ny firenena’. Nialàn'ny governemanta ihany ilay fanapahankeviny, izay vao mainka niteraka fisavoritahana momba ny hoe ‘iza no mahazo alàlana miditra ao amin'ny firenena, iza no tsy mahazo?”
Vantany vao fantatra ny fisian'ny karazany Omicron [fr] hita tamin'ny Novambra 2021, nodidian'ny ministeran'ny fitaterana ireo orinasa miandraikitra fitaterana an'habakabaka hampitsahatra avy hatrany ny famandrihan-toerana rehetra amin'ireo sidina hiditra any Japàna hatramin'ny faran'ny Desambra.
Io fepetra vaovao io dia toa mandràra ihany koa ny fidiran'ireo teratany japôney, ka manitsakitsaka araka izany ny lalam-panorenan'ny firenena sy, ny fiantraikany avy hatrany, mamela ireo mpivezivezy marobe ho tafahitsoka any ivelan'ny firenena.
Tao amin'ny Twitter ireo mpiteny Anglisy no naneho hevitra taorian'ny nanambaràna ilay fandraràna ny dia rehetra mankany Japàna, tamin'ny fampiasàna ireo tenifototra toy ny hoe #japantravelban sy #鎖国 (sakoku).
Ny sakoku [fr] dia ny vanimpotoana fitokana-monina efa ho taonjato roa ka nandritra izany dia noraràn‘ny fitondràna jadona miaramila tao Japàna [fr] ny fisian'ireo Eorôpeàna tao amin'ny fireneny, avy eo indray dia ny Amerikàna, ary nosakanany hatramin'ny olompireneny tsy hivoaka ny firenena.
Japàna, izay nandray vahiny mpizahatany 32 tapitrisa avy any ivelany tamin'ny 2019, taona iray talohan'ny valanaretina, dia nihataka tanteraka tamin'izao tontolo izao. Vinavinaina ho 190 000 ny fitambaran'ny isan'ireo mpitsidika isantaona hatramin'ny fiafaran'ny 2021, noho ny fandraràna ireo dia rehetra tsy dia manandanja ataon'ireo mpizahatany sy vahiny monina maharitra any an-toerana.
Taorian'ny andro marobe nisian'ilay “krizy“, vao mainka niteraka fisavoritahana misimisy kokoa ny nialàn'ny governemanta japoney tamin'ilay fanapahankeviny, nanoloana ireo kiana tsy mitsaha-mitombo.
Toa hoe na ny Praiminisitra Kishida Fumio, vao avy nanao ny volantanteliny taorian'ny fandresena azony tamin'ny fifidianana [fr] tamin'ny volana lasa, na i Saito Tetsuo, minisitry ny Fitaterana, dia samy tsy nisy nahafantatra ny fanapahankevitra noraisin'ireo mpiasan'ny ministera nandràra ireo teratany japôney tsy hody an-tanindrazana.
Tao anaty tatitry ny vaovao nalefany tamin'ny 3 Desambra 2021, ny fantsom-pahitalavitra NHK dia nanazava fa mikatona indrindra indrindra ho an'ireo olona rehetra tsy mponina maharitra ao amin'ny firenena ary fandraràna mikendry manokana ireo teratany afrikàna:
Voaràra ireo fahatongavana vaovao avy any ivelany (afa-tsy ny vady, zanaky ny teratany, ny diplaomaty, ireo mponina maharitra)
Afaka mivoaka sy miverina miditra an'i Japàna ny avy amina firenena sy faritany 152 ireo vahiny mponina ao Japàna
Tsy afaka miverina ireo vahiny mponina ao Japàna raha toa ka avy any amin'ireo firenena folo avy ao atsimon'i Afrika, raha toa ry zareo ka nitoetra tany nandritra ny 14 andro (tsy mihatra amin'ireo teratany japôney ny fameperana)
Firenena voakasik'io fandraràna mivandravandra io i Angôla, Botswana, Eswatini, Lesotho, Malawi, Môzambika, Namibia, Afrika Atsimo, Zambia ary Zimbaboe. Ny handraràna ireo mpivezivezy avy any amin'ireo firenena afrikàna no tena anton'ilay fandraràna, noho ny fiakatry ny isan'ireo tranga Omicron any ivelan'ny tanibe.
Ankoatra izay, nanomboka tamin'ny fiandohan'ny Desambra dia noferan'ny governemanta japôney ny isan'ireo tsy teratany japoney tonga isambolana, nanomboka tamin'ny 5000 talohan'ny fisian'ilay karazany vaovao ‘Omicron’, ka lasa 3500 isambolana. Rehefa noraisina ilay fepetra hamehana, dia mety hanakana ny fahafahan'ireo teratany japôney tratry ny tampoka tany ivelan'ny fireneny tsy ho tafody an-tanindrazany io famerana ny fahafahan'ny zotram-piaramanidina io.
Michael Ryan, iraky ny OMS, dia nametra-panontaniana momba ilay fepetra noraisin'ny governemanta hanakatona ny sisintany amin'ireo vahiny. Hoy izy nanamarika :
Raha resaka valanaretina dia tena sarotra amiko ny hahatakatra ny anton'ilay fitsipika. Mamaky ny pasipaoronao ve ilay viriosy? Fantany ve ny zom-pirenena zakainao na ny toerana fonenanao ara-dalàna?
Nahafehy be ny fiparitahan'ny valanaretina COVID-19 i Japàna, sy nampihena ny isan'ireo maty isanandro tao amin'io firenena manana mponina 116 tapitrisa io ho am-polony vitsy monja tamin'ny Novambra 2021. Nisy ny fanantenana hoe hanalefaka ireo fameperana napetrany amin'ireo mpivezivezy ilay firenena.
Nahavoa maro tamin'ireo vahiny mponina maharitra ao Japàna ilay fanamafisana ny fanarahamaso ireo sisintany taorian'ny fipongaran'ny Omicron. Noho ny fahatahorany fepetra vaovao hanitsoka an-dry zareo any ivelan'ny firenena, toy ilay filazàna tsy tonga volana momba ny fandraràna ireo sidina mankany Japàna tamin'ny faran'ny Novambra, tamin'ny ankamaroany dia tafahitsoka tany ivelany tsy nahazo nody tany amin'ny fireneny izy ireny nandritra ny fanambaràna ireo fepetra noho ny hamehana nanomboka tamin'ny fiandohan'ilay valanaretina, tsy afaka nitsidika namana sy fianakaviana tany am-pitan-dranomasina.
Leo aho mahita azy ireo milalao ny fiainantsika sy manova fitsipika isak'izay tiany.
— Camille Von (@DeadBlueMorpho) 2 desambra 2021
Hatramin'ny niantombohan'ilay valanaretina, be ireo naniry hianatra any no niatrika fanelingelenana na fanemorana ny tetikasany noho ireo fameperana naterak'ilay valanaretina amin'ny fidirana any Japàna nampiharina tamin'ny olona rehetra tsy teratany japôney na tsy mponina maharitra any.
Ny an'i Melek Ortabasi, Kanadiàna-Amerikàna, izay mipetraka any Japàna amin'ny maha-mpianatra azy amin'izao fotoana izao, no ohatra iray amin'ireo fameperana toa tsy am-piheverana ny fidirana ao Japàna. Tsy afaka ny hanatona azy ireo zanany, izay sady tsy teratany japoney no tsy mponina maharitra, toejavatra iray tondroin'i Ortabasi ho fanitsakitsahana ny zon'olombelona :
Arahaba @JapaninCanada @JapanCons_vanc Manana hafatra faran'izay tena manandanja aho ho an'ny Consul général Hatori. Ankasitrahako indrindra ny setriny haingana sy famahàna malaky ity olana ity, izay tena fanitsakitsahana ny zo maha-olombelona. pic.twitter.com/ogipgkai8K
— Melek Ortabasi (@MOrtabasi) 2 Desambra 2021
Tany am-piandohan'ny Novambra, nilaza ny governemanta japoney fa hanome alàlana ireo mpianatra iraisampirenena hiverina hanohy ny fianarany. Nefa ny fipongaran'ny Omicron tamin'ny faran'ny volana dia toa namela ireny mpianatra ireny any anaty lavaka tsy hita noanoa :
Fotoana angamba izao hanaovana sonia sy handefasana ny fanangonan-tsonia 2.0… https://t.co/SLauEyvplL
— Chelsea Szendi Schieder（チェルシー・センディ・シーダー） (@SzendiChelsea) 3 Desambra 2021
Ny olona sasany nahita hanihany, na vazivazy, izay zavatra nataon'i Japàna tamin'ilay ezaka fohy hametrahana fandraràna tanteraka ny fivezivezen'ireo terataniny sy ny vahiny.
Clinton Godart, mpampianatra tantara, teraka tany Hôlandy ary mampianatra ao Japàna, dia nilaza fa mety tsara aminy ilay fomba vaovao nitondran'ny firenena ny sakoku. Nandritra ireny taonjato fitokana-monina tao amin'ny firenena ireny, ny hany eorôpeàna afaka nekena hiditra tao Japàna dia ry zareo Hôlandey, natokana tany amina nosy kely iray tao amin'ny seranan'i Nagasaki, andrefan'i Japàna.
Japàna, toa manomana fitokana-monin'ny firenena (sakoku) iray vaovao ianao. Tsy miraharaha mihitsy an'i Nagasaki aho, ary izaho dia Hôlandey ihany koa, araka izany, omeo alàlana aho.
Raha toa raràna tsy hiala ny fireneny ireo Japôney, dia tena tanteraka tokoa ilay fitokana-monina. pic.twitter.com/O4tt303Z9y
— Clinton Godart (@ClintonGodart) 1 Desambra 2021